TAONA 2013 : HIVAHA VE NY KRIZY? – MyDago.com aime Madagascar
TAONA 2013 : HIVAHA VE NY KRIZY?
« Arahabaina tratry ny farany e » Io no teny nipololotra tao am-bavan’ny tsirairay androany rehefa nifankahita. Nihazakazaka tokoa ny fivadibadiky ny andro sy ny volana ka nanjary ho taona iray ka tsy maintsy nanam-piafarana. Ny taona 2012 sy ireo zavatra noraiketiny ho fahatsiarovana ka nipetraka ho tantara ho lovain’ny taranaka fara amandimby no nivalona, fa ny krizy lavareny dia mitohy hatrany. Samy manao izay zakan’ny fahefamividiny ny Ambanilanitra amin’ny fiatrehana izany faran’ny taoan izany ary iandrasana ny taona vaovao. Efa miantraika isam-baravarana ny krizy, izay miha mafy hatrany. Tsy mitsaha mitombo ny vidin’ny entana ilain’ny mponina andavanandro, ka maro no zara raha mihinan-kanina. Nanampy trotraka izany rahateo ny fiakaran’ny vidin’ny solika ka niafara tamin’ny fisondrotry ny saran-dalana. Manoloana izany dia tsy mahita vaha olana matotra sy manaram-penitra ireo milaza azy ho mpitondra ny firenena. Variana miady ny tomboantsoany ny tenany manokana amin’ny fitsetsefana ny harem-pirenena izy ireo ka tsy mijery ny mahasoa ny vahoaka. Tsy laharam-pahamehana ho azy ireo ny fitsinjovana sy fanamavainana ny fahasahiranan’ny valabemandry, fa aleon’izy ireo manangana hopitaly manaram-penitra sy kianjan’ny Rugby. Ny toerana izany nanorenana ireny anefa dia nalaina amboletra teo am-pelantanan’ny orinasa Tiko an’ny filoha Ravalomanana Marc. Tsy anjaran’ny fitondrana tetezamita no manao fotodrafitr’asa tahaka ireny fa ny manao izay hahatontosa ny fifidianana no tokony atao. Nihazakazaka zandrikely nitokana ireny manaram-penitra ireny tao anatin’ny fotoana fohy, sady mangalatra depart mialoha ihany koa amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny volana 08May 2013. Hatramin’izao aloha dia mbola manjavozavo ny mikasika io fifidianana io, tsy fantatra na hisy na tsia izany. Ny Cenit izay mikarakara izany fifidianana izany sahirana ara-bola, ary mbola mametram-panontaniana ny fahaleovantenany. Ny mpamantsy vola efa nilaza fa hamatsy vola ny fifidianana raha toa ka tanterahina amin’ny antsipiriany ny tondrozotra.Hatreto dia tsy mbola nisy ny fanatanterahana izany fa misy ireo andininy sasany dinganina ny fampiharana azy. Ny filoha Ravalomanana Marc dia efa nanao fanambarana fa tsy hirotsaka ho fidiana amin’io fifidianana io. Fanapahankevitra feno fahendrena amin’ny maha ray amandreny azy no nataony teo anatrehan’izao tontolo izao. Tafiditra ao anatin’ireo teboka tao anatin’ny fehinkevitry ny Sadc farany teo tany Dar Es Salam izany dia ny fandresen-dahatra azy roalahy tsy hirotsaka. Tsy niandry ho resena lahatra ny filoha Ravalomanana Marc fa avy hatrany dia nanao ny fanambarana. Tampoka tamin’ny mpanongam-panjakana iny fanambarana iny ka sahiran-tsaina izy ireo. Niezaka nanely etsy sy eroa fa tsy mahafeno ny fepetra ho firotsahana ny filoha Ravalomanana Marc ka rariny iny fanambarana iny. Ny satan’I Cotonou dia mazava ny voalaza ao fa ny mpanongam-panjakana dia tsy mahazo mitondra firenena. Ny frantsay ihany koa dia efa nilaza fa mbola zaza loatra Rajoelina ka tokony hiandry ny fifidianana manaraka. Dikan’izany dia tsy mahazo milatsaka ny lehiben’ny mpanongam-panjakana. Hatreto aloha dia tsy mbola sahy nanambara na hirosatsaka na tsia ny tenany. Izy rahateo dia mivadibadi-dela amin’ny fanapahankevitra raisiny. Efa tandravadin-koditra aminy ny famafazana lainga teto amin’ny firenena. Ho an’ny mpanaram-baovao politika dia matahotra fifidianana Rajoelina ka tsy sahy manambara ny heviny. Ireo mpisolelaka aminy no arosony hiteny amin’ny Rnm sy Tvm hangataka azy hirotsaka. N’inon’inona anefa izy ireo dia mazava ny fanapahan-kevitry ny Sadc fa tsy maintsy hampiharana izay tapak’izy ireo farany teo anisan’izany ny famerenana tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazany. Efa miomana amin’izany ny Ankolafy Ravalomanana sy ny vahoaka Malagasy manerana ny Nosy. Ny daty sy ny ora sisa andrasana amin’ny fahaotongavany tsy ho ela. Ny volana janoary hitsidika io dia anisan’ny volana hanadanja satria ankoatra ny fahatongavan’i dada, dia eo ihany koa ny fampihaonana tanterahin’ny FFKM. Efa miroso tsikelikely amin’izany izy ireo amin’ny alalan’ny fanatontosana fotoam-bavaka isam-paritra ary ho avy tsy ho ela ny diniky ny samy Malagasy. Eo anatrehan’izany dia mieptraka ny fanontaniana hoe hivaha amin’izay ve ny krizy? Ny ampitso mifono mistery no hamaritra izany. Koa samia ary ho velon’aina ho samy tratry ny taona vaovao 2013 ahita ny tohiny.
Auteur Solo Razafy*Publié le 31 décembre 2012 Catégories Politique
5 pensées sur “TAONA 2013 : HIVAHA VE NY KRIZY?”
Dia samy tratry ny taone vaovao daholo.Enga anie ity taona 2013 ity hitondra filaminana ara-tsaina sy ara-panahy ny vahoaka malagasy, hamerina an’i Gasikara amin’ny ara-dalàna ary hanova ihany koa ny ratsy rehetra ho tsara.
On est atteint du fana (fanatisme) quand on aime plus qu’on connaît
On est atteint de la philie quand on connaît plus qu’on aime
On est atteint de la phobie quand on connaît plus qu’on déteste
On est atteint de la folie quand on déteste plus qu’on connaît.
On est atteint de l’aphonie quand on reste muet devant le ni..ni
1 janvier 2013 à 9 h 11 min
Faly miarahaba ny rehetra tratry ny taona vaovao ! Toa ny fanao isan-taona, dia fiarahabana manokana no atolotra ho anao sy ny ankohonanao, Andriamatoa Filoha Ravalomanana. Ny faniriana dia maro dia maro ka tsy ho voatanisa eto, fa maniry fahasalamàna ho an’ny rehetra ny tenako, mba hahafahin-tsika manatontosa ny adidy sy tolona goavana izay mbola miandry antsika !
Dia mirary fahombiazana amin’izay asa sy zavatra ataonareo, ry MPIARO NY ARA-DALÀNA MALAGASY !
Mirary soa sy Fahombiazana amin’izay rehetra atao !
Enga mba hitondra hafaliana vaovao ho an’ny malagasy ny taona vaovao 2013.
Mirary ity Nosy Malala ity ho afaka amin’ny fanandevozana ataon’ny vazaha ny sain’ny sasany, ka mba ho velona any aoriana any ihany ny MAHA MALAGASY ny MALAGASY !
2 janvier 2013 à 6 h 56 min
TSY MAINTSY HO TONGA IZANY HETAHETANTSIKA REHETRA IZANY SATRIA ANDRIAMANITRA TSY MAMELA NY OLONY HO SAHIRANA FOANA NA HANDAO AZY AO ANATIN’NY MAFY FA HO AVY NY ORA IZAY HANDAMINANY IZAO TANINTSIKA IZAO.
Précédent Article précédent : HAFATRY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
Suivant Article suivant : MIRARY NY SOA MANOKANA HO AN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC